Mompera Rajoelison Germain: « Henjana ny hafatry ny Papa, saingy milaza ny marina… » | NewsMada
Mompera Rajoelison Germain: « Henjana ny hafatry ny Papa, saingy milaza ny marina… »
Anisan’ireo nanatitra ny Papa Fransoa teny Ivato, omaly, ny mpandrindra ny fandraisana sy ny fikarakarana ny fitsidihan’ny eo anivon’ny Fiketrahana masina, ny mompera Rajoelison Germain. “Mafy sy mangidy ireny hafatra ireny, saingy nilaza ny marina izy. Mitsikera toetra ireny fa tsy manenjika olona. Mitaona ny olona hibebaka”, hoy izy. Nanteriny koa fa anisan’ny laharam-pahamehan’ny Papa Fransoa ny tontolo iainana, tandindomin-doza amin’izao fotoana izao, ka miantso sy misarika ny saintsika samy handray ny tandrify azy ny tsirairay, araka ny nambarany. Notsiahiviny koa ny ady atao amin’ny kolikoly sy ny resaka fihavanana, araka ny nanambaran’ny Papa Fransoa azy. “Tsy misy fivoarana raha tsy fongorina hatrany ifotony izany… Mitaky fihavanana tena izy araka an’i Krsity ny ray masina fa tsy ilay fihavanana amboaboarina”, hoy ihany izy.
Nisaotra ny rehetra ny kardinaly Tsarahazana
Manoloana izany, hirotsaka bebe kokoa hanakaiky vahoaka ny fiangonana. Hanamafy amin’ny fandraisana anjara feno eo amin’ny fanabeazana sy ny fampianarana ary koa ny fikarakarana ny mahantra, araka ny nambarany ihany.
Nialoha izany, nankasitraka ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fandraisana ny Papa Fransoa ny kardinaly Tsarahazana Desiré. “Samy faly nahazo ny tsodranony isika… Manana fahendrena ny Malagasy. Teo koa ny fihavanana sy ny fiombonam-po tamin’ny fandraisana ny ray masina. Faly sy afa-po izy ary gaga amin’ny hafanam-po sy ny firaisankina mandray vahiny”, hoy izy.